नेपाल इन्स्योरेन्सले शतप्रतिशत हकप्रद बिक्री नगर्दै फेरि प्रस्ताव गर्याे हकप्रद, सेयरधनी किताब बन्द कहिले ?
April 5, 2018 Aagan Post0Comments
शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लागेको नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले हकप्रद जारी नहुँदै फेरि थप ६५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद र बोनस पश्चात कायम हुने चुक्ता पूँजी ६१ करोड ७६ लाखको ६५ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने जनाएकाे हाे ।
बैशाख ५ गतेदेखि हकप्रद जारी नहुँदै कम्पनीले ६५ % हकप्रद जारि गर्ने निर्णय कम्पनी सञ्चालक समितिको चैत २१ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले आगामी बैशाख २१ गते इन्स्यारेन्सको ६९ औं बार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ ।
कम्पनीले हकप्रद विक्री गरेर बीमा समितिले तोकेको चुक्ता पूँजी पुर्याउन हक्प्रदको बाटो रोजेको हो ।
सभाका लागि कम्पनीले बैशाख ७ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने भएको छ । यसअनुसार बैशाख ६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले शतप्रतिशत हकप्रदले समेत पाउने गरि प्रस्ताव गरेको २.२६ प्रतिशत बोनस प्राप्त गर्न र सभामा सहभागि हुन पाउनेछन् ।
सेयरधनी किताब बन्द कहिले ?
सभाका लागि कम्पनीले बैशाख ७ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने भएको छ । यसअनुसार बैशाख ६ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले शतप्रतिशत हकप्रदले समेत पाउने कम्पनीले जानेको छ ।
← सिटिजन्स बैंक (CZBIL)ले थप साधारण सेयर (एफपिओ) निष्कासन गर्ने, कति कित्ता जान्नुहोस
उन्नति माइक्रोफाइनान्स (UMB)को हकप्रद परिमार्जन, हकप्रद अब कति ? →
धितोपत्र बोर्डले कालोधन रोक्ने, शेयर कारोबारमा कडाई गर्ने
श्री इन्भेष्टमेन्टले माघ १५ गतेदेखि हकप्रद निष्कासन गर्ने
January 11, 2018 Aagan Post 0